Nama Hedduutti Sagantaa Dargaggootii Oromoo Ganna 50essoo Alii Birraa Sirba Itti Jalqabe Ulfeessuuf Qopheessaniif MN Yaahuutti Jira VOASites by Language
Jimaata, Guraandhalaa 12, 2016 Local time: 19:07
Nama Hedduutti Sagantaa Dargaggootii Oromoo Ganna 50essoo Alii Birraa Sirba Itti Jalqabe Ulfeessuuf Qopheessaniif MN Yaahuutti Jira Print
WASHINGTON,DC— Eeegee maqaa sirbaa itti baasan malee silaa maqaan warri baaseef,Alii Mohaammad Muusaa,sun qofan hin hamnee eegee hujiin ulfeessanii Dr.Ali Birraa ta'e. Alii Birraa gara ganna 14-15 keessa sirba jalqabe.
Dargaggoon Oromoo, MN,Amerikaa jiranilleen “jabaa keenna ka jiruu ulfeeffannee,ka du’ee hujii isaatiin qaabannee galata galchinaaf,” jedhanii jabaa ulfeessuutti jiran.
Warra hujii tanaa keessa jiru keessaa tokkoo Dr. Sintaayyoo Badhaaneeti,Atlaantaa,Amerikaa jira.
Qophiin tun waan Alii haga ammaa ummataa hojjate,jabeenna isaa faarsaniif.Seenaa isaa dubbachaa,kitaabatti barreessanii,vidiyoon qopheessanii lafa kaahuu.
Hujii tana akka Dr.Sintaayyootti ijoollee gannii 20 keessa jirutti qopheessuutti jiraa…“namii ummataa ufiitif jedhee dabre kabaja argachuu qabaa addunyaalleen beekuuf dandeetti.”